Sajoon Qanyoo kamshaa Fakkasaa irraa kamshaa qonyoota Bézier fakkasuuf oolu bana. Qonyootii Bézier qaphxiilee jalqabaa fi dhumaa jedhamaniin hikama. Qonyoowwaan Qonyoo Bézier qaphxiilee too'annoo ("qabannoota") jedhamaniin hiikama. Qaphxiilee too'annoo sochasuun boca qonyoo Bézier jijjiira.
Qaphxiileee too'annoo halata "Qaphxiile Gulaali" qofaan mul'atu. Qaphxiilee too'annoogengoodhaan bakka bu'ama. Qaphxiileen anchor immoo iskweeriidhaan bakka bu'ama. qaphxii jalqabaa xiqqoo qaphxiilee anchor irraa guddata
Segmantoota qonyoo Bézier fi sarara qajeelaa walitti makamuun qonyoota Bézier baay'ee xaxamaa ta'aan uumu. Ce'uumsootni garagaraa sadi ta'an gara sagmentoota cinnaatti argamanitti makkamuuf fayyaduu danda'u:
Qaphxiin hituu walfakkaatoo mogaa lamaan keessaa gama tokkon dacha'aa sararaa walfakkaatoo fi sararoota too'annoo akka sarara qajeelaatti waliin socho'an lama of keessaa qaba.
Qaphxiilee lalaafaan mooggaa kamiiniyyuu sarara jalataa adda addaa qabaachuu danda'uu
Sararoota hiituu xiyyoo sararoota of danda'a tokkon ykn lama ofkeessaa qabu. Jijjiiraan moogaa tokko qofaan taasiffamu, moggaa isa birroorratti galtee tokkoolee hin qabu.
Meshaalee Qonyoo akkamitti akka fayyadamtu
Kamshaa fakkasaa irraa, kamshaa Qonyoowwan baniitii meeshaa Qonyoo fili.
Iddoo sajoon akka sif jalqabuu barbaadduutti cuqaasi fi qonyoon kallattii kamitti akka deemu barbadetti harkisi. Sararri dhorkaa kallattii agarsiisa.
Yemmuu kallatti tarsaa digrii 45'n murteessuuf, harkistu, Jijjirraa gadi qabi.
Iddoo qaphxii too'annoo duraa jirtuuti hantuuttee baasi.
Iddoo segmanti qonyoo akka sidhuumtu barbaadutti, qarree siqsi. Qonyoon kunis qarree hordofa.
Sarara kaasani xumuruuf, iddoo qaphxii Maayyiirratti lama cuqaasi.
Boca marfamaauumuuf, qaphxii jalqaba sararaa lama-cuqaasi.
sarara hiituu dabaluuf, qabduu hantuuttee cuqaasitti baasi. Segmenti itti annuu fakkii kaasuuf, hantuuttee siqsi.
Sarara hiituu laafaa dabaluuf
Akkaataa fayyadaminsa meshaa sarara unka akka feetee
Kamshaa fakkasaa irraa, Curves masaka fi Sarar unkaa Bilisaa meeshaa filadhu.
Iddoo qonyoon akka sif Egalu barbaaduutti cuqaasi, qabduu hantuuttee gadi qabi turi.
Akkuuma koobbee goggoggaadhaan hojatu sarara unka akka feetee kaasi.
Sararicha xumuruuf qabduu hantuuttee baasi.
Title is: Qonyoota Fakkasaa